Guddoomiyaha baarlamaanka oo la filayo in uu maanta soo gaaro Nayroobi, Golaha cusub ee wasiirada oo la filayo in 6da bishan la horkeen baarlamaanka iyo ammaanka ra'isul wasaare Cadde oo ay la wareegeen ciidamada madaxtooyada. Ruunkinet 29/11/07
Warar aan dhawaan ka helnay magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in goddoomiyaha baarlamaanka la filayo in uu maanta soo gaaro magaalada Nayroobi.
Sheekh Adan Madoobe oo haatan ku sugan dalka Itoobiya ayaa la sheegay in uu si dhaqsi ah u aadi doono magaalada Baydhabo si uu ugu siii gogol xaaro ansixinta golaha wasiirada ee dhawaan baarlamaanka la horkeeni doono.
Warka ayaa intaasi ku daraya in inta badan golaha wasiirada ay ka imaan doonaan golaha baarlamaanka ayadoo ay ugu horeeyaan kuwa aadka ugu dhow siyaasidda madaxweynaha dowladda federaalka ah.
Warar xog ogaal ah ayaa tibaaxaya in inta badan golaha wasiirada uu magacaabi doono madaxweyne Yuusuf ayadoo laga yaabo in ra'isul wasaaraha talo aad u yar laga weydin doono magacaabidda golaha wasiirada.
Dhanka kale, ammaanka ra'isul wasaaraaha ayaa la sheegay in ay la wareegeen ciidamada madaxtooyada dowladda federaalka ah kadib markii ra'isul wasaaraha la dejiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo.
Ra'isul wasaare Nuur Cadde oo ay dad badan aamin san yihiin in uu yahay shaqi horay looga nabad galay carbdiisa iyo gacantiisa ayaa haatan la sheegay in uu dhexgalay maamul (system) dhisan oo aad u adan.